LMDE का लागि भण्डारहरू लिनक्सबाट
त्यसो भए म यसका लागि आधिकारिक भण्डारहरू छोड्छु LMDE प्रत्येक को लागी छ को एक संक्षिप्त विवरण संग।
यस भण्डारले पछिल्लो प्याकेजहरू समावेश गर्दछ जसले निर्भरता त्रुटिहरू निम्त्याउँदैन र जुन टोली र प्रयोगकर्ताहरूको परीक्षण गरीएको छ LMDE.
यस रिपोजिटरीमा प्याकेजहरू जुन रिपोजिटरीबाट प्रविष्ट हुँदैछ डेबियन परीक्षण ताकि ती विकासकर्ताहरू द्वारा परीक्षण गरिएका छन् र उनीहरूका बारे आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्दछन्। यो समस्या आयो भने रिपोर्ट गर्न चाहने प्रयोगकर्ता द्वारा पनि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » LMDE का लागि भण्डारहरू
त्यो एकदम ठुलो कुरा हो! भर्खरको भण्डारहरू डेबियन CUT विचार हो जुन मिंटमा लागू गरियो। आशा छ कि यो डेबियनमा पर्छ।
Pixaroglet लाई जवाफ दिनुहोस्
सटीक डेबियन सीयूटी काम गर्दैछ, वास्तवमा मैले यसलाई धेरै ट्र्याक राख्नुपर्दछ, तर डेबियन सीयूटी मेलि lists सूचीमा मैले देखेको छु कि डेबियन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर लिनक्स मिन्टको नाम कसरी राखियो। त्यसोभए हुनसक्छ तपाईंको ईच्छाहरू (र सबैको) चाँडै साकार हुनेछ 😀
धेरै धेरै धन्यबाद! म एक निर्भरता समस्या थियो, हेरौं कि यो भण्डारहरू कसरी भइरहेको छ 😉
Luweeds लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद, यो सन्दर्भको रूपमा रहन्छ, कहिले काहिं तपाईं रिपहरू खेल्न थाल्नुहुन्छ र तपाईंले मूल याद गर्नुपर्दछ।
उही उद्देश्यको साथमा मैले पोष्ट राखें, सम्झनको लागि जुन मूल हो 😀
धेरै राम्रो जानकारी, राम्रो कुरा उहि अपडेट केन्द्रले तपाईंलाई लाइनहरू बदल्न भन्छ ...
म एक हप्ताको लागि LMDE मा छु, र यो उबन्टु भन्दा अलि बढी "जटिल" छ, जहाँबाट म आएको हुँ, म सन्तुष्ट छु र म यहाँ बस्न योजना गर्दैछु।
म आशा गर्छु कि VirtualBox का साथ मेरा समस्याहरू छिट्टै नै समाधान गर्ने छ, ताकि यो पूर्ण रूपमा कार्य गर्दछ, र वाइन स्थापना गर्दछु र मशिन तयार हुनेछ।
Damien लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद, उत्कृष्ट, म LMDE मा नयाँ हुँ र मलाई यो मनपर्‍यो, जुन यस जानकारीले मेरो लागि निर्भरता समस्या समाधान गर्‍यो _ !!!
जोसेफलाई जवाफ दिनुहोस्
धिक्कार्यो मैले यो परिवर्तन गरें र मैले पूरै डेस्कटप परिवर्तन गरें र मैले धेरै विकल्पहरू लिएँ जुन मैले पाएँ, त्यहाँ पछाडि जान कुनै मार्ग छ?
राम्रोसँग shit em को साथ यो पठाउँदा रिपोजिटरीहरू परिवर्तन गर्नुहोस्, स्पष्ट रूपमा मसँग अधिक lmde छैन यदि केहि डेबियन छैन भने, मसँग वालपेपर परिवर्तन गर्न विकल्प पनि छैन। मसँग भएको संस्करण पुन: स्थापना गर्न जाँदैछु। मँ केहि प्रोग्रामको भर्खरको संस्करण प्राप्त गर्न चाहान्छु, वितरण परिवर्तन गर्नलाई होइन। परीक्षण र त्रुटि, परीक्षण र त्रुटि ...
खैर, यी भण्डारहरू ती हुन् जुन उनीहरू आफैंले सिफारिस गर्छन् O_O
तपाईंसँग पछिल्लो र आगमन सम्पत्तिहरू हुनुपर्दछ वा तपाईंले ती दुई मध्ये एक छान्नु पर्छ? यदि यो उत्तरार्द्धहरू हुन् भने, तिनीहरू मध्ये कुन चाहिँ उत्तम वा बढी सल्लाह दिइन्थ्यो?
Edorta लाई जवाफ दिनुहोस्
LMDE प्रयोगकर्ताहरू पनि यसलाई परिवर्तन गर्न सोच्दैनन्। तिनीहरू एक भयानक shit पठाउन जाँदैछन्। छोड्नुहोस् कसरी यो बर्बर काम गर्दछ
रेड ह्याट बिलियन डलर क्लबमा सामेल हुन्छ